ऋषिराजको ‘चुरीफुरी’ र ‘द्रौपदी’, बन्लान् यी फिल्म ? « Ramailo छ
ऋषिराजको ‘चुरीफुरी’ र ‘द्रौपदी’, बन्लान् यी फिल्म ?
प्रकाशित मिति : Oct 2, 2018
ड्रिम गर्ल निर्देशक ऋषिराज आचार्यले दुई फिल्म निर्देशनको घोषणा गरेका छन् । ‘ड्रिम गर्ल’को प्रोमो लञ्च प्रेसमिटमा ऋषिले ‘चुरीफुरी’ र ‘द्रौपदी’ निर्देशनको घोषणा गरेका हुन् ।
आरबी मुभिजको प्रस्तुतीमा रिल एण्ड रियल सिनेमा र ऋषिराज आचार्य फिल्म मिलेर नयाँ दुई फिल्म निर्माण गर्न लागिएको प्रेसमिटमा आचार्यले बताए । यद्पी उनले कलाकार तथा प्राविधिक भने खुलाएनन् । अहिलेसम्म केही पनि फाइनल भएको छैन, निर्देशक आचार्यले भने ।
कलाकार र प्राविधिक बिनै ऋषिलाई फिल्म घोषणा गर्न किन यति हतारो ? प्रेसमिटमा यस्तै चर्चा चल्यो । कतै निर्माता भाग्ने डरले त होइन् ? उसो त घोषणामै सिमित धेरै फिल्म छन् । ऋषिको ‘चुरीफुरी’ र ‘द्रौपदी’ यसमै पर्ने त होइनन् ?